Association Mère et Enfant Madagascar Hanampy ny reny amin’ny fahafantarana ny zony
Mbola betsaka ireo vehivavy tsy mahalala akory ny zony eto amintsika.
Antony iray mampahazo vahana ny herisetra ao an-tokantrano izany amin’ny ankapobeny ka nanosika ny Company Mahasoa hanangana ny “Association mère et enfant Madagascar”, tarihin-dRamilison Ramandry Soafara. Omaly no nampahafantarana tamim-pomba ofisialy ny fitsanganan’ny fikambanana tetsy amin’ny Urban hotel Ambatonakanga sady nanehoana ireo mpiara-miasa maro isan-karazany ihany koa. Anisan’izany ny la starlette communication… Antom-pijoroan’ny fikambanana, araka izany, ny hanampy ireo reny amin’ny fahafantarana ny zony. Toraka izany koa ny hahafahana manolo-tanana ireo reny sahirana, asa izay kasain’ny fikambanana hatomboka amin’ny taona 2019 ho avy izao. Hikarakara hetsika goavana hanatevenana ny kitapom-bolany, araka izany, ny fikambanana rahampitso sabotsy 1 desambra. Eny amin’ny Espace Vert Dana Club eny Amborompotsy Talatamaty no hanatanterahany izany « dejeuner dansant spécial nostalgie» hanomboka amin’ny 12 ora antoandro hanatevenan’izy ireo ny kitapom-bolany. Marihina fa efa misy mpikambana 400 ankehitriny ao anatin’ny association mère et enfant. Hofanina hahay hanabe ireo menaky ny ainy ihany koa ny mpikambana ao hahafahana mamolavola olom-banona.